फोर्डद्वारा एकै दिनमा सयवटा गाडी हस्तान्तरण
काठमाडौं । गो फोर्डले आफ्ना ग्राहकवर्गको माग उच्च तवरले पूरा गर्न एकै दिन बुधबार सयवटा नयाँ गाडीहरु ग्राहकलाई हस्तान्तरण गरेको छ । ‘आफ्ना ग्राहकहरुले यो चाडपर्व फोर्डको नयाँ गाडीसँग मनाउन पाऊन्’ भन्ने उद्देश्यले एकै दिनमा १०० वटा नयाँ गाडीहरु हस्तान्तरण गरेको जनाएको छ ।
बजारमा फोर्ड गाडीको उच्च माग रहेको दाबी गर्दै फोर्डले घटस्थापनाको दिन नेपालभरीका वितरकहरुबाट १०० वटा गाडीहरु हस्तान्तरण गरेको जनाएको छ । त्यसमध्ये १० वटा विराटनगर, ४ वटा पोखरा, ३ वटा नारायणघाट, ६ वटा वुटवल, १५ वटा नेपालगंज, ३ वटा धनगढी, ८ वटा विर्तामोड, १ वटा दांग, २ वटा बनेपा, ३ वटा जनकपुर, ४ वटा भैरहवा, १० वटा वीरगंज र ३१ वटा काठमाडौमा हस्तान्तरण गरिएको कम्पनीको भनाइ छ ।
ग्राहकहरुले फोर्ड गाडीको खरिदमा फोर्ड फेस्टिभ अफरमार्फत उपहारहरु पनि पाएका छन् । यस अफरमा ग्राहकवर्गले फोर्ड गाडीको खरिदमा विशेष नगद छुटको साथै रु. ५०,००० देखि रु. २,५०,००० बराबरको पक्का उपहार पाउने छन् ।
साथै बम्पर लक्की ड्र मार्फत ५ भाग्यशाली जोडीले स्वीट्जरल्याण्ड मा ४ रात ५ दिनको टूर प्याकेज जित्ने अवसर पनि पाउने बताइएको छ ।
वाटफोर्ड एफए कपको फाइनलमा
काठमाडौँ । वाटफोर्ड एफए कपको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ । गएराती भएको खेलमा वाटफोर्डले वोल्भरहम्पटनलाई ३-२ गोल अन्तरले पराजित गर्दै एफए कपको फाइनलमा प्रवेश गरेको हो । निर्धारित ९० मिनेटको खेलमा
वाटफोर्डमाथि म्यानचेस्टर युनाइटेडको सहज जित
काठमाडौँ । इङलिश प्रिमियर लिग अन्तर्गत म्यानचेस्टर युनाइटेडले वाटफोर्डमाथि सहज जित हासिल गरेको छ । गएराती भएको खेलमा युनाइटेडले वाटफोर्डलाई २-१ गोल अन्तरले पराजित गरेको हो । युनाइटेडको जितमा मार्कोश राशफोर्ड
सिटी र वाटफोर्ड एफए कपको सेमिफाइनलमा, म्यानचेस्टर युनाइटेड बाहिरियो
काठमाडौँ । म्यानचेस्टर युनाइटेड एफए कपबाट बाहिरिएको छ । गएराती भएको खेलमा युनाइटेड वोल्भरहम्पटनबाट २-१ गोल अन्तरले पराजित भएपछि एफए कपको क्वाटरफाइनलबाट पराजित भएको हो । वोल्भरको जितमा राउल जिमेनेज र